नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : एमाले र काङ्रेस भित्र महाभारतको रडाको मच्याइदिंदै छन प्रचन्ड ! राजनीतिक मुर्खहरु झल्लु, केपी र माकुने तिनतिर, शुशिल र शेर बहादुरको पनि पानी बाराबार, एमाले काङ्रेस झन कमजोर बनाइदै, जता बाट पनि "नेपाली बिन लादेन" प्रचन्डलाई फाईदै फाईदा !
एमाले र काङ्रेस भित्र महाभारतको रडाको मच्याइदिंदै छन प्रचन्ड ! राजनीतिक मुर्खहरु झल्लु, केपी र माकुने तिनतिर, शुशिल र शेर बहादुरको पनि पानी बाराबार, एमाले काङ्रेस झन कमजोर बनाइदै, जता बाट पनि "नेपाली बिन लादेन" प्रचन्डलाई फाईदै फाईदा !
संविधानसभा चुनावको नयाँ मिति घोषणा भएका बेला एमालेमा महाधिवेशनको विवाद उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक र चुनावी तयारीका लागि ७ असारका लागि तय भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक एक महिना पर धकेलिएपछि पार्टीका वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेललगायतका
नेताहरू महाधिवेशन गर्नु पर्ने पक्षमा उभिएका हुन् ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बुधबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिना पछि सारेको विज्ञप्ति जारी गरे। महत्त्वपूर्णबाहेक केन्द्रीय सचिवालयका सचिवले विज्ञप्तिमार्फत पार्टीका निर्णय सार्वजनिक गर्ने एमालेको अभ्यास छ।
अध्यक्ष खनालले बुधबार स्थायी कमिटीमा असार ७ मा पूर्वनिर्धारित केन्द्रीय कमिटी साउन ४–७ मा सार्ने अडान लिएपछि त्यसमा असन्तुष्ट सचिव पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरेनन्। त्यसैले खनाल आफै अघि सर्नुपर्‍यो।
पौडेल मात्र होइन, स्थायी कमिटी बैठकमा नेता केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव शंकर पोखरेललगायत नेता असार ७ गतेबाट केन्द्रीय कमिटी बैठक, साउन पहिलो साता राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बैठक गर्ने पक्षमा उभिएका थिए।
केन्द्रीय कमिटी सरेपछि साउन ४ र ५ मा हुने पूर्वनिर्धारित राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बैठक अनिश्चित बनेको छ।
पार्टीको अधिवेशनपछि शक्तिशाली निकाय राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बैठक डेढ–डेढ वर्षमा हुने प्रावधान छ। साउनको पहिलो साता विधान संशोधन गर्न यो बैठक डाकिएको थियो। पछिल्लोपटक २०६८ फागुन २१ काठमाडौंमा परिषद बैठक भएको थियो।
बैठक धकेल्ने र धकेल्न नहुने नेताहरुबीचको छिनाझप्टीले एमालेको शीर्ष तहमा चर्कंदो बेमेल छताछुल्ल पारेको छ।
यस घटनालाई फागुनसम्म महाधिवेशन गर्नुपर्ने केपी ओली पक्षधरको दबाब झेल्ने खनाल पक्षको खेलका रुपमा हेरिँदैछ छ।
'अध्यक्ष खनालका पछिल्ला गतिविधि उहाँ फागुनसम्म कुनै हालतमा महाधिवेशन हुन नदिने खेलमा देखिनुभएको छ,' ओली निकट एक पोलिटब्युरो सदस्यले नागरिकसँग भने, 'त्यसैका लागि बैठक धकेल्न थालियो।' प्रतिनिधि परिषद बैठक सार्न केन्द्रीय कमिटी बैठकसँग पहिल्यै जुधाइएको ती नेताको आरोप छ।
५–५ वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने व्यवस्थामा राष्ट्रिय संकट वा विशेष परिस्थिति भएमात्र केन्द्रीय कमिटीले अघि वा पछि सार्न सक्छ। अघिल्ला महाधिवेशन पनि विभिन्न कारण एक वर्ष लम्बिने गरेको छ।
ती सदस्यले मंसिरमै संविधानसभा निर्वाचन हुन्छ भन्ने सुनिश्चित नभएको दाबी गर्दै चुनाव अघि नै महाधिवशेन भएर नयाँ नेतृत्वसाथ पार्टी चुनावमा जाँदा राम्रो हुने तर्क गरे। 'मंसिरमा चुनाव भए ठिकै छ,' ती सदस्यले भने, 'नत्र महाधिवेशन पछि सार्ने अर्को बहाना प्राप्त हुनेछ। विगतका गलत नजीर पछ्याउँदै कम्तीमा एक वर्ष ढिलो गर्ने पक्षमा खनाल देखिनुभो।'
एमाले राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरु भन्छन्–पछिल्लो समय जनवर्गीय संगठनमा आफ्नो पकड बढेकाले ओली नेतृत्वमा पुग्न आतुर छन्। 'चाँडो महाधिवेशन माग उनको यही भित्री आकांक्षा रहेको उनीहरुको तर्क छ।
यहीबीच, युवासंघ नेपालमा ओली निकट महेश बस्नेत अध्यक्षमा दोहोरिएका छन्। महिला, मजदुरमा पनि ओलीकै पकड छ भने विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनमा पनि पकड राम्रो छ।
खनाल पक्ष भने ओलीको यो चाहनाले पार्टीमै समस्या ल्याएको दाबी गर्छन्। 'जनवर्गीय संगठनमा केही प्रभाव विस्तार देखिएकाले ओलीजी हौसिनुभएको छ,' खनाल निकट एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने, 'तर भूगोलमा भने उहाँका अवस्था खस्कँदै गएको छ। त्यता उहाँले विचारै गर्नुभएको छैन।'
पार्टीभित्र परिवर्तनको लक्षण देखिएको समीकरणले पनि ओलीलाई नेतृत्वमा पुग्न हतारो लागेको विश्लेषण गरिँदैछ।
खनालविरुद्ध पहिले एकैठाउँ रहेका माधव नेपाल र ओलीबीच भने पछिल्लो समय दूरी बढेको छ।
'नेपाल, खनाल र वामदेव गौतम एकै स्थानमा आउने अवस्था पुग्नुअघि नै महाधिवेशन होस् भन्ने पक्षमा ओली हुनुहुन्छ,' ती नेताले भने, 'यस्तो अवस्था आए पार्टी नेतृत्वमा कहिल्यै पुग्न नसक्ने ठानेर उहाँले यो कुरा उठाउनु भएको हुनसक्छ।'
नेपाल पछिल्लो समय ओलीबाट टाढिएका छन्। महाधिवशेन मागलाई उनी बेमौसमी बाजा भनिरहेका छन्। 'ओलीले जसजसको साथ लिनुभएको छ, नेपाललाई त्यो मन परेको छैन,' नेपाल निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'ओलीसँग टाढिए पनि खनालसँग मिलेर जाने समीकरण भने बनेको छैन।'
ओली 'टेस्टेड' नेता होइनन्। अहिलेसम्म पार्टी तथा सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका छैनन्। यद्यपि उनी पार्टी खुला भएदेखि नै पार्टीपंक्तिमा शक्तिशाली नेता रहँदै आएका छन्।
'लामो समयदेखि पार्टी र देशको राजनीतिमा प्रभावशाली भए पनि उहाँ कहिले पनि पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुभएको छैन,' ओली निकट नेताले भने, 'पार्टीमा उहाँले लिएको नीतिअनुसार चलेको छ भने नेतृत्व पनि पाउनुपर्छ भन्ने दाबी अस्वाभाविक होइन।'
मदन भण्डारीको निधनपछि संविधानसभाका निर्वाचनको समयसम्म माधवकुमार नेपालका डेढ दशक एकछत्र नेतृत्व थियो। पाँचौँ महाधिवेशनपछि केन्द्रीय सदस्य बनाइएको झलनाथ खनाल महासचिव र आठौं महाधिवेशनपछि अध्यक्ष नै बने। नेपाल र खनाल दुवै प्रधानमन्त्री बने।
ओली बहुदलीय जनवादको प्रमुख व्याख्याता आफूमात्रै भएको ठान्छन्। खनाल पाँचौं महाधिवेशनको समयमा मदन भण्डारीले ल्याएको बहुदलीय जनवादका समर्थक थिएनन्। उनी सिपी मैनालीले अघि सारेको नौलो जनवादका पक्षमा थिए। खनाल त्यतिबेला बहुदलीय जनवादलाई 'दक्ष प्रजापतिको टाउको' भन्थे।
'अहिले बहुदलीय जनवादलाई छायामा पार्ने अन्य मुद्दा चर्काउने गरिएको छ,' ओली निकट एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने, 'बहुदलीय जनवादले पँुजीवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर पार्टीमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो। समाजवादी क्रान्तिमा जाने कुरा गरिँदैछ।'
'मदन भण्डारीले ल्याएको विचारका उत्तराधिकारी हौं भनेर देखाउन पुँजीवादी क्रान्तिको कुरा उठाएका हुन्,' खनालनिकट एक नेताले भने, 'समाजमा आएको परिवर्तनलाई उहाँहरु नकार्न सक्नुहुन्न, भोलि यसमै नआई सुख छैन।'